ArcGIS-ESRI - Bogga 7 - Geofumadas
Maadaama Google Analytics leeyahay in ay jiraan dad isticmaala AutoCAD oo codsanaya arintan, waa kuwan jawaabta degdegga ah. Dhamaan hawlahan waxaa laga sameeyaa Microstation, inkastoo ay jiraan siyaabo aad ku sameyn karto badhannada ama amarrada safka (furaha) waxaan isticmaali doonnaa xalalka menu. 1 Sidee loo gudbiyaa feylalka Microstation (dgn) ilaa AutoCAD (dxf ama dwg)? Faylka / kaydinta ...
Waxaa jira barnaamijyo kala duwan si ay u soo bandhigaan oo isku dubaridi maps, oo ay ku jiraan ArcGIS (ArcMap, ArcView), kala cayncayn ah, Cadcorp, AutoCAD, Microstation, heerka GIS ka hor arkay sida qaar ka mid ah faa'iidooyinka qaadan ... Xaaladdan oo kale, waana arki doonaa sida ay u xirmaan adeegyada imaging kala cayncayn ah , tani sidoo kale waa hab lagu soo dejiyo sawir si ay u kaydiso. Post kale ayaan ku hadlaa ...
MapMachine waa adeeg ay bixiso ESRI si loo geeyo National Geographicics, halkaas oo aad ka arki kartid khariidadaha khaaska ah ee meelo kala duwan oo adduunka ah. Khariidadda Venezuela, qaybinta dadwaynaha Isku-dubarid, iyo wax-qabad. Waxaa ka mid ah fursadaha loo diri karo: xogta tirakoobka cimilada Cudurrada tirada dadweynaha iyo jidgooyooyinka dayacmoodka waddooyinka sawirada dayax-gacmeedka Macluumaadka dalxiisayaasha iyo kuwa kale. Aad u ...
Sida laga soo xigtay qaar ka mid ah comments on blogs qaar ka mid ah, waxa ay u muuqataa in ay gaaraan Google Earth tegi doonaa ka baxsan ujeedooyinka asalka ah ee goobta web; Noocan oo kale ah waa ay dhacdo codsiyada in aad diiradda degaanka ee dalka. El Diario Hoy, City Mar de Plata daabacdaa kiis, waa ...